Yealink UVC20, ezi enyi maka teleworking [Nyochaa] | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 08/06/2021 10:00 | Emelitere ka 29/05/2021 13:57 | Ngwa, General, Nyocha
Teleworking abịawo ma ọ dị ka ọ ga-anọ. Enwere ọtụtụ nzukọ, nkwupụta ma ọ bụ nzukọ anyị na-eme telematically site na Otu, Skype, Mbugharị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị na ahịa. Agbanyeghị, ọ bụ n'oge ndị a mgbe anyị chọpụtara na ikekwe kamera kamera ahụ na igwe okwu kọmputa gị adịghị mma ...
Ọ dị mkpa iji melite arụmọrụ nke igwefoto anyị na igwe okwu anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta nsonaazụ ọma, maka nke a anyị nwere azịza ọgụgụ isi. Anyị na-eleba anya na kamera kamera UVC20 nke Yealink, ezigbo enyi maka nzukọ Microsoft Otu na ọtụtụ ndị ọzọ.
3 Jiri ahụmahụ
Na nke a, n'agbanyeghị mmetụta na nkwakọ, eziokwu bụ na a rụzuru ngwaahịa ahụ nke ọma. Mere nke plastic fọrọ nke nta ka kpamkpam, anyị nwere a iko / methacrylate mkpuchi na dum n'ihu na-enye ya mara mma adịchaghị obi na-adị. Ihe mmetụta dị n'akụkụ ihu nwere ihe niile dị mkpa mgbe igwe okwu dị n'akụkụ aka nri na n'akụkụ aka ekpe nke na-egosi ọnọdụ nke ngwaọrụ ahụ. Anyị na-aga n'ihu ma ọ dịkarịa ala na sistemụ mmechi lens zuru ezu nke ga-eme ka anyị nweta nzuzo.
Ihe nha: 100mm x 43mm x 41mm
Maka akụkụ ya, anyị nwere ntọala nwere sistemụ mgbatị nke na-eme igwefoto a ka ọ bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ụwa niile ma dị maka ndị nlekota na laptọọpụ niile, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị nwee ike iji eriri nke ụwa niile maka njem atọ na isi, ma ọ bụ nwee obi ụtọ na ya sistemụ nke na-enye anyị ohere ịhapụ ya ozugbo na tebụl. Enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ọ na-enye anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n’uche na igwefoto nwere ike ịtụgharị n’onwe ya ma n’uche ma n’igwe. Ihe ngosipụta nke ọkọlọtọ na igwefoto weebụ a na igwe okwu nwere arụ.
Anyị ga-ekpori ndụ kamera weebụ a na Yealink UVC20 a na-enye nso nso nke autofocus nke dị n'etiti 10 centimeters na 1,5 mita. Anyị nwere eriri n’azụ azụ USB 2.0 2,8 mita nke ga-ezuru oke karịa ebe niile. Agbanyeghị, ọ bụ oge elekwasị anya na ihe mmetụta gị, anyị nwere ụdị CMOS 5 MP nwere oghere f / 2.0 nke nwere ike ịnye mmepụta vidiyo na mkpebi 1080p FHD na 30FPS dị ka ikike kachasị oke. Maka nsonaazụ dị mma, o nwere autofocus nke na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike dị iche iche iji nwee ọdịiche dị iche na ụda.
Ngwaọrụ ahụ ga-arụ ọrụ Windows na macOS enweghị nsogbu ọ bụla. Maka akụkụ ya, igwe okwu bu ihe nduzi nile ma nwee SNR nke kachasi 39 dB. N'ezie, nzaghachi azịza siri ike n'etiti 100 Hz na 12 kHZ, ọ bụ nsonaazụ mgbanwe. Anyị ahụbeghị nsogbu ọ bụla na ike ọrụ aka, n'eziokwu anyị ga-asị na ọ juru anyị anya site na ike nke Yealink UVC20 iji nye nsonaazụ ọma ọbụlagodi na nsogbu ọkụ doro anya na mpaghara njide.
Igwefoto nwere usoro nkwụnye na egwuregwu n'ụzọ zuru ezu, Nke a pụtara na anyị agaghị eme ụdị nhazi ọ bụla tupu ojiji ya, eziokwu ahụ bụ na anyị enweghị sọftụwia ebudatara maka ebumnuche a na-agba akaebe na nke a. Ozugbo anyị jikọtara igwefoto Yealink UVC20 site na ọdụ ụgbọ USB, anyị na-ahụ ya n'etiti isi ọdịyo na vidiyo mgbe anyị mere oku vidiyo. site na mmemme dị iche iche maka ebumnuche a. N'okwu a, anyị ga-ahụ igwefoto na igwe okwu igwefoto n'onwe ya iche, na-enye anyị ohere iji igwe okwu nke aka anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ.
N’oge na-adịbeghị anya anyị jiri igwefoto dekọọ pọdkastị kwa izu nke ndị ọrụ ibe iPhone ugbu a ma ị nwere ike ịhụ ya na vidiyo agbakwunyere. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji hụ arụmọrụ zuru ezu nke igwefoto, ọ bụ ezie ee, na nke a, anyị ejirila isi iyi ọdịyo ọzọ. Igwefoto nwere ngwa ngwa autofocus ngwa ngwa, nke juru m anya ọbụlagodi ọnọdụ ọkụ na-adịghị mma, nke a bụ otu n'ime isi ihe kachasị mkpa iji chebara echiche, eziokwu nke inwe autofocus ga-eme ka anyị nwee ike ịga n'ihu ya na-enweghị nsogbu na usoro ndị a.
Igwefoto adịghị oke ọnụ, nsogbu kachasị m zutere bụ eziokwu na anaghị edepụta ya dị ka ngwaahịa dị na Amazon. Nwere ike nweta ya na weebụsaịtị dị ka Onedirect na ego akwadoro nke euro 89,95, N’ịtụle na ọ bụ ngwaahịa akwadoro maka Otu Microsoft na Zoom, ọ dị ka ọ dị ọtụtụ.
Omume a bụ ihe ị ga - atụ anya site na ngwaahịa nwere njirimara ndị a, otu ihe ahụ ga - eme na nnukwu ngosipụta nke ntọala ya yana mmepe mmepe nke elekwaghị anya n'oge oku vidiyo niile, na - enweghị mgbagha, ngwaahịa nke anyị nwere ike ịkwado ma ọ bụrụ na ị na-achọ imezi ihe ngosi gị.
Ihe na: 8 June nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: Mee 29 nke 2021
Nhazi / Jiri
Kere na ihe na-eche "adịchaghị"
A nnọọ vasatail na mfe na-eji isi
Nsonaazụ dị mma nke igwefoto na autofocus
Agbaghara m USB-C
Ihe ole na ole ịre ahịa na Spain
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Yealink UVC20, ezi enyi maka teleworking [Nyochaa]
Hoover H-purifier 700, nyochaa nke a nnukwu ikuku ọcha